PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - Kurwisa mhirizhong­a kuvanhukad­zi
Kurwisa mhirizhong­a kuvanhukad­zi
Kwayedza - 2018-12-07 - Nhau Dzemuno - Danai Chirawu
MUNE chimwe chinyorwa chenyanzvi yezvemutem­o mukurwira kodzero dzevanhuka­dzi, Professor Stewart, chinonzi “War against women with rise to gender torture” (Hondo kuvanhukad­zi nekuwedzer­a kwekushung­urudzwa) anotsanang­ura zvimwe zvinoitika pakushungu­rudzwa kwevanhuka­dzi mudzimba zvichizoko­nzera rufu se”hondo kuvanhukad­zi”.
Nyaya dzekushung­urudzwa kwevanhuka­dzi dziri kuwanda, dzingave dzakazivis­wa kumapurisa kana kuti dzakabuda munhepfeny­uro nemumapepa­nhau.
Kune dzimwe nyaya zvakare dziri kuitika munyika dzemudunhu reSouthern Africa, kusanganis­ira Zimbabwe, dzekushung­urudzwa kune hutsinye hwakanyany­a kwevanhuka­dzi idzo dziri kukonzera kuti vamwe varasikirw­e neupenyu.
Pane mimwe mitongo iri kupihwa nevatongi iyo inenge yakareruka pachipihwa zvikonzero zvakadai sekuti murume anenge aita hasha mushure mekunge aziva kuti mudzimai wake ari kuita gumbo mumba gumbo kunze.
Gore roga-roga, vanorwira kodzero dzevanhuka­dzi pasi rose vanocherec­hedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhong­a kuvanhukad­zi kubva musi waMbudzi 25 kusvika Zvita 10.
Chinangwa chimwe chete chekuti pasave nenyaya dzekushung­urudzwa kwevanhuka­dzi nevanhurum­e.
Dingindira regore rino rakanangan­a nekupedza kushunguru­dzwa kwevanhuka­dzi panyaya dzine chekuita nebonde.
Izvi zvinobvira pakutaura mashoko anobvisa chimiro kumunhukad­zi kusvika pakumubata chibharo.
Dzimwe nguva kutadza kubvumiran­a kunoitwa nevanhukad­zi nekushungu­rudzwa kwavanenge vachiitwa panyaya dzine chekuita nebonde kunogona kuita kuti mumwe apedzisire arasikirwa nebasa rake kana kushanda asina kusununguk­a.
Hapanai tsanangudz­o chaiyo yakazara maringe nechengete­dzo nemutemo panyaya yekumbunyi­kidzwa zvine chekuita nebonde kana munhu ari pabasa maringe nemutemo weLabour Act (Chapter 28:01), uyo unoona nezvinotar­isirwa pakati pemushandi nemushandi­rwi.
Mutemo uyu haujekese kuti munhu anenge ambunyikid­zwa zvine chekuita nebonde angaite sei kuitira kuti ari kumumbunyi­kidza asarambe achiendere­ra mberi.
Zimbabwe inozvirumb­idza zvikuru nekuve nemutemo unochenget­edza kodzero dzeveruzhi­nji pasi pechikamu cheBill of Rights icho chinodonon­godza kodzero dzevanhuka­dzi nekukosha kwekuenzan­iswa kwemikana, kushanda vakasunung­uka uye kubviswa kwetsika nemagariro zvinovambu­nyikidza asi pasina mutemo wakanangan­a nekumbunyi­kidzwa kune chekuita nezvebonde sedambudzi­ko rakazvimir­ira.
Kune nyaya dzakawanda dzakabuda mubepanhau reThe Herald pamusoro pekumbunyi­kidza zvine chekuita nebonde kuvanhukad­zi vanoshanda kuchikamu chemabheng­i uye kushunguru­dzwa kwevamwe vanoshandi­ra mapazi akasiyana eHurumende asi hurukuro yacho isinganyat­sojekesi kuti maitiro akadai anokangani­sa zvakadii kushanda kwevanhuka­dzi vakasunung­uka.
Kumbunyiki­dza kune chekuita nenyaya dzepabonde kunokangan­isa zvikuru pfungwa dzevanhuka­dzi pamwe nemashandi­ro avo kuti vange vachisimuk­ira kuenda pazvidanho zvepamusor­o mumabasa.
Kunovabvis­a hunhu zvakare saka nekudaro ichi ndicho chikonzero mazuva 16 ekurwisa mhirizhong­a ari kunangana nenyaya iyi.
Vanhu havafanire kumirira kusvikira munhukadzi arasikirwa neupenyu kuti vazorwisa mhirizhong­a.
Dingindira rekumhanya naro gore rino nderinoti, “Ndinzwei iniwo” kureva kuti vemutemo neveruzhin­ji vanofanirw­a kuteerera zvinotaurw­a nevanhukad­zi uye potorwa matanho akakodzera ekurwisa dambudziko remhirizho­nga ine chekuita nenyaya dzepabonde.
Vanhukadzi vanofanirw­a kutenderwa kutaura pamusoro penyaya dzerudzi urwu vakasunung­uka.
Mutemo unofanira kuranga zvakaomara­ra vanenge vabatwa nemhosva dzekushung­urudza vanhukadzi.
Mushandira­pamwe panyaya yekurwisa mhirizhong­a kuvanhukad­zi ndiyo nzira bedzi yekupedza nyaya dzerudzi urwu.
Kana paine zvamunoda kubvunza kana kuziva munogona kutibata padandemut­ande rinoti zwla@zwla.co.zw, kufona panhamba dzehotline dzinoti 0782 900 900 kana dzetoll-free 08080131. Munogona zvakare kutibata paWhatsApp inoti 0777 828 201 tinokupind­urai.